musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda kuenda kuDubai: kana vangodzika COVID tsvuku rondedzero
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UAE Kuputsa Nhau • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda kuDubai: Yakagadzirira kusimuka
Uganda Airlines iri munzira kutanga nendege dzendege kuenda kuDubai dzakatemerwa Gumiguru 2021, ichiteverwa neLondon neGuangzhou kubvira maAirbus akapihwa zviri pamutemo Chitupa cheAir Operator (AOC) kubva kuUganda Civil Aviation Authority (UCAA) nezuro, Nyamavhuvhu 23, 2021 .
Kubudirira uku kunounza kupera kwechikamu chechitanhatu chechikamu chechitupa chakaona maviri eA5s akadzika muEntebbe.
Iyo yendege ikozvino inogona kuchinja pakati peCRJ-900 uye yepamusoro chinzvimbo A330 pane masevhisi, zvinoenderana neyevatakurwi uye nhumbi kudiwa.
A330s ichashandiswa pamasevhisi kuLondon, Dubai, Mumbai, uye Guangzhou kana Uganda yabva paCOVID-19 red rondedzero.
Acting Director General weUCAA, Fred Bamwesigye, vakaombera timu nekupedza kubudirira kwehurongwa hwekuwedzera iyo Airbus kuMitsubishi CRJ 900 paAOC panguva yemabiko ekugashira akaitirwa muEntebbe.
Chikamu chekupedzisira che5-danho retifiketi maitiro akateera kutiza kubva Entebbe, Uganda, kuenda kuJohannesburg, South Africa, apo mukuru wevakuru vekudzidzisa, Francis Barros uye mukuru wevakuru vekudzidzisa Pete Thomase vakamisa Airbus # A330-800 dzakateedzana Neo musi waAugust 12, 2021, kuOR Tambo International Airport.
Iyo budiriro inounza kumagumo eakafambiswa mashanu-akapetwa setifiketi maitiro ayo akaona maviri eanotakura eA5s akadzika muEntebbe, ichimirira AOC kubvira nendege payakapedza kurongeka kwenyika mutakuri wechipiri we330 A2s muna Kukadzi kubva kumugadziri Airbus akamirira iyo AOC.
Ikozvino inopa iyo nendege mukana wekuchinjika pakati peCRJ-900 uye yakakwira chinzvimbo A330 pane masevhisi, zvinoenderana neanotakura uye anotakura zvinhu.
Sekureva kweUganda Airlines Acting CEO, Jennifer Bamuturaki, maA330 achashandiswa pamabasa ekuenda kuLondon, Dubai, Mumbai, uye Guangzhou kana Uganda yabva paRODV-19 red rondedzero munyika dziri kuenda. Izvo zvinoramba zvichirambidzwa pakufamba kubva kuUganda zvaona basa rakarongwa kuenda kuDubai richitsvedza nemwedzi kusvika Gumiguru, nepo kuLondon iko zvino kwaendeswa kutanga kwa2022.
London, Mumbai, uye Guangzhou ndeimwe yemigwagwa yepamusoro isina kuchengetedzwa yekunongedza-kubva-kunongedza kubva kuEntebbe zvinoenderana nehuwandu kubva muna 2019. Nzira yeEntebbe-London yaive nevatakuri vanosvika 84,000 pakufamba-famba mukati megore, ichiteverwa neMumbai pa42,000 uye Guangzhou pa29,000. Izvi zvaimiririra mutoro wezuva nezuva wevatakuri mazana maviri nemakumi maviri pakati peEntebbe neLondon - 230 kuenda kuMumbai uye makumi manomwe nemapfumbamwe kuGuangzhou.
MuUganda, kubva muna Ndira 3, 2020, kusvika nhasi, Nyamavhuvhu 24, 2021, kwave nemakumi masere nemakumi masere neshanu nemakumi masere neshanu nemakumi masere nematatu akasimbiswa e COVID-118,673 aine 19 vakafa, vakaziviswa kuWorld Health Organisation (WHO). Kubva munaAugust 2,960, 23, huwandu hwe 1,163,451 mishonga yekudzivirira yakapihwa.